नेपालको फुटबलमा कतार एयरवेजले गर्यो ठुलो लगानी ! – सजल सन्देश
नेपालको फुटबलमा कतार एयरवेजले गर्यो ठुलो लगानी !
By Sajal sandesh	 On२७ मंसिर २०७६, शुक्रबार ०५:५६
काठमान्डौ – शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितालाई कतार एयरवेजले मुख्य प्रायोजन गर्नेभएको छ । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)का अनुसार कतार एयरवेजले एन्फालाई प्रायोजनस्वरुप रु एक करोड ७० लाख उपलब्ध गराउनेछ ।
प्रम ओलीको गृहजिल्लामा कांग्रेसको प्यानल नै विजयी
४१ विभाग बनाउने देउवाको प्रस्ताव पौडेल र सिटौला असहमत